ကိုဗစ်၁၉-မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါကာကွယ်ဖို့ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ချက်တွေ စတင်
ကိုဗစ်၁၉-မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါကာ...
16 มี.ค. 2563 - 13:43 น.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သေဆုံးသူ ၆၅၀၀ ကျော်နဲ့ ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၁၆၀၀၀၀ ကျော် ရှိလာပါပြီ။
မတ်လ ၁၆ ရက်အထိ ပြန်ကောင်းလာသူက ၇၇၀၀၀ ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်က သေဆုံးသူ ၃၂၀၀ ကျော်၊ ကူးစက်ခံရသူ ရှစ်သောင်းကျော်နဲ့ အများဆုံးဖြစ်ပြီး အီတလီက သေဆုံးသူ ၁၈၀၀ ကျော်၊ ကူးစက်ခံရသူ ၂၄၀၀၀ ကျော်နဲ့ ဒုတိယအများဆုံး၊ အီရန်က သေဆုံးသူ ၇၀၀ ကျော်၊ ကူးစက်ခံရသူ ၁၃၀၀၀ ကျော်နဲ့ တတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားက သေဆုံးသူ ၇၅ ဦးနဲ့ ကူးစက်ခံရသူ ၈၂၀၀ ကျော်နဲ့ စတုထ္တအများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နောက်မှာတော့ ကူးစက်သေဆုံးနှုန်းတွေက စပိန်၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နဲ့ အမေရိကန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ ဗြိတိန်တို့ အစဉ်လိုက်ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာမှာတော့ မတ်လ ၁၅ ရက် ညပိုင်း အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်အရ ဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့်နဲ့ သံသယလူနာ စုစုပေါင်း ၁၃၀ ဦး ရှိပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှုမရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ မနေ့က မတ်လ ၁၅ ရက်က စပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတချို့က မြန်မာအစိုးရက ပြည်ဝင်ခွင့် စတင်ကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်အရ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းများနေတဲ့ နိုင်ငံတွေက လာတဲ့ ခရီးသွားတွေကတစ်ဆင့် မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် ကူးစက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ အခုလို ကန့်သတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မတ်လ ၁၅ ရက် ညပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
တရုတ်၊ ကိုးရီးယား၊ အီတလီ၊ အီရန်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်နဲ့ ဂျာမနီ စတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့ ၇ နိုင်ငံက လာသူတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက်တချို့ ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူပေပြည်နယ်နဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဒယ်ဂူးနဲ့ ဂျောင်ဘွတ်ပြည်နယ်တွေကို နှစ်ပတ်အတွင်းသွားထားသူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီကို သွားထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်း မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာရင် သတ်မှတ်ထား တဲ့နေရာတွေမှာ နှစ်ပတ်ထားရှိစောင့်ကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယားရဲ့ အဲဒီပြည်နယ်တွေကမဟုတ်ဘဲ တခြားဒေသက လာသူတွေဆိုရင်တော့ မြန်မာရော နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပါ သက်ဆိုင်ရာနေအိမ်တွေမှာ ၁၄ ရက်ကြာ သီးသန့်နေထိုင်ဖို့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ဥရောပမှာ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်နေတဲ့ အီတလီ၊ အီရန်၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်နဲ့ ဂျာမနီတို့ကို နှစ်ပတ်အတွင်း သွားထားတဲ့ မြန်မာအပါအဝင် ခရီးသည်အားလုံးဟာ အစိုးရက သီးသန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ ထားရှိစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီကလာမယ့် သံတမန်တွေကတော့ သူတို့နေအိမ်တွေမှာ ၁၄ ရက်သီးသန့်နေထိုင်ဖို့ အစိုးရက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သံတမန်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေက ဝန်ထမ်းတွေ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ အရေးပေါ် ကိစ္စနဲ့ လာဖို့ရှိတယ်ဆိုရင် အနီးစပ်ဆုံးမြန်မာသံရုံးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မှာတော့ ဒီကနေ့ကစလို့ ကျောင်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ၊ ကဇာတ်ရုံတွေ ပိတ်လိုက်ပါပြီ။
မြန်မာမှာလည်း ဒီကနေ့ မတ်လ ၁၆ ရက်ကစလို့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို ဧပြီလကုန်ထိ ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ပိတ်တဲ့ကာလ ထပ်တိုးနိုင်တယ်လို့ ရုပ်ရှင်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
"ဧပြီ လကုန်ထိ ပိတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒါ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေးအရ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ထပ်ပြီး ပိတ်တဲ့ကာလ ကို တိုးဖို့ရှိပါတယ်" လို့ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံတာဝန်ရှိသူက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့မှာတော့ သေစေနိုင်တဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့နေမှုကို ရပ်တန့်နိုင်ဖို့ ဒီကနေ့ကစပြီး ကျောင်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဘားတွေကို ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
နယူးယောက်မှာ စားသောက်ဆိုင်ပေါင်း ၂၇၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်က သူတို့ဟာ တစ်ခါမှမကြုံစဖူး ခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီး ဒါကို စစ်ဆင်ရေးစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ တုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်လို့ ပြောကြားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဒီကနေ့ မတ်လ ၁၆ ရက်ထိ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူပေါင်း ၃၇၀၀ ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၆၉ ဦး ရှိနေပါတယ်။
နယူးယောက်မှာ လူရှစ်သန်းကျော်နေထိုင်ပြီး ဗိုင်းရပ်နဲ့ ငါးဦး သေဆုံးထားပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေဟာ အသက် ၅၀ ကျော်ကနေ ၈၀ ကျော်တွေဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ နဂိုကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
အခုတော့ အမေရိကန်က ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ၂၆ နိုင်ငံအပြင် ဗြိတိန်၊ အိုင်ယာလန်၊ တရုတ်နဲ့ အီရန် စတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ က လာသူတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်မှုတွေ စတင်လိုက်ပါပြီ။
ကိုဗစ်ရှိမရှိ ဥရောပခရီးသွားတွေကို စစ်ဆေးမှုကြောင့် အမေရိကန်လေဆိပ်တွေ ဖရိုဖရဲဖြစ်
အခုလို ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်တာတွေကြောင့် အမေရိကန်ကို အပြေးအလွှားပြန်လာကြသူတွေနဲ့ လေဆိပ်တွေမှာ ပြည့်ကြပ်နေခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်လေဆိပ်တွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကင်းစင်မှုရှိမရှိ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့် မနေ့က စလို့ လေဆိပ်တွေမှာ ခရီးသည်တွေနဲ့ ပြည့်ကြပ်ပြီး ဖရိုဖရဲအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဥရောပမှာတော့ ကပ်ရောဂါ ဆိုးဆိုးရွားရွား ကူးစက်ခံနေရတဲ့ အီတလီ၊ စပိန်နဲ့ ပြင်သစ်တို့မှာ တစ်ရက်တည်းနဲ့ သေဆုံးမှု အမြင့်ဆုံး စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။
အီတလီမှာ တစ်ရက်တည်း သေဆုံးသူ ၃၆၈ ဦး၊ စပိန်မှာ ၉၇ ဦးနဲ့ ပြင်သစ်မှာ ၂၉ ဦးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း အဲဒီသုံးနိုင်ငံအပါအဝင် ဥရောပတလွှားနိုင်ငံတွေဟာ သူတို့နိုင်ငံသားတွေကို ရောဂါမကူးစက်စေဖို့ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
အမြဲစည်းကားနေတဲ့ ပြင်သစ်က Arc de Triomphe အနီးတစ်ဝိုက်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့မျိုးမှာတောင် လူသွားလူလာပြတ်ပြီး တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။
ဂျာမနီဟာ ပြင်သစ်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ သြစတီးယား၊ ဒိန်းမတ်၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ စတင်လိုက်ပါပြီ။
ပေါ်တူဂီကလည်း စပိန်နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ နယ်စပ်တွေကို ပိတ်ဖို့ ပြင်နေပါတယ်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံကတော့ တင်းကျပ်တဲ့ပိတ်ပင်မှုတွေ စတင်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။ ပြည်သူတွေကို အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်နဲ့ ဆေးနဲ့ အစားအစာဝယ်ဖို့နဲ့ မိသားစုအရေးပေါ်ကိစ္စ ခရီးသွားလာခွင့်တွေကိုပဲ ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သြစတီးယားနိုင်ငံကတော့ တနင်္လာနေ့ကစပြီး လူငါးဦးထက် ပိုပြီးစုဝေးတာတွေကို ပိတ်ပင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ယာလန်မှာတော့ လူစည်းကားရာ အဖျော်ယမကာဆိုင်တွေကို မတ်လ ၂၉ ရက်ထိပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပဒေသတလွှားနိုင်ငံတော်တော်များများက ကျောင်းတွေလည်း ပိတ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO က ဥရောပဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရာ ဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
ရောဂါဗဟိုချက်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်မှာတော့ ကူးစက်မှုနှုန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီး သေဆုံးနှုန်းလည်း ကျလာနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုဗစ်၁၉-မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေမှာ ရောဂါကာကွယ်ဖို့ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ချက်တွေ စတင်